DEG DEG: GABAR SOMALI AH OO 11 MALYAN LA FAKATAY OO SI CAJIIB LEH U DHACDAY DAD CAAN AH! - HALDOOR MEDIA
November 22, 2021 November 22, 2021 Haldoormedia	0 Comments
Gabar somali ah oo lagu magacaabo Sofiya Nuur oo wadanka Kanada dagan ayaa baranaa bulshada qabsatay iyo saxaafada Mareykanka. Gabadhaan ayaan ayaa la sheegayaa iney 11 Malyan dollar ka dhacday dad ah oo wadanka Mareykanka kunooö badankood taasoo kajaabisay gabi ahaan dadka ey dhacday iyo sida fudud ey lacagahaas uga qaadata.
Sofiya ayaa lasheegayaa in tagi jirtay goobaha iyo xaflada dadka calanka ey joogaan taas iska dhigi jirtay qof caan ah ama saaxiib la ah dad caan ah. Ayadoo dadka ey goobahaas ugasheekeysa ama tusta sawiro ey la gashay dadka calanka ah ey leedahay waan aqaan. Dadka badankood ayaa iska aamina oo isla goobta saaxiib kula noqda.
Dadka waxa ey lacagaha uga qaadataa si xirfad oo waxa ey iska dhigtaa in ey ka dhumeen kaararkeeda iyo aqoonsigeeda goobta markaas ey joogto. Dadka ayeey isla markaas weydiisataa qarash taasoo si amaah uga qaadataa si ey iska bixiso Hotel ka , Taxi, cunto iyo wixii la halmaama.
Daawo Qisada OO Dhameystiran dad la wareysatay oo ka hadleeen qisada ku dhacday iyo baranaa bulshada sida dadka ey uga falceliyeen. Muqaalka hoose ka Daawo barteen Youtube ka.
← Wuxuu badbaadiyey naf kale, isagoo naftiisii ku waayay!
Abaaro: Dhaliyada Tiktok waxa ey muteysteen bilad sharafeed! dhanka barta Tiktok iyo caalamka iyo somalia →